Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi RedMiNote 4G | Androidsis
Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi RedMi Note 4G, angamba ny elanelam-potoana Android tsara indrindra amin'ny vidiny ambany
Androany izahay mitondra anao, araka ny hitanao amin'ny horonantsary mifamatotra eo ambonin'ireto tsipika ireto ihany, ny fandalinana lalindalina ny iray amin'ireo terminal misy ny vidiny ambany Android, na dia misy aza ny fepetra arahana ara-teknika izay an'ny terminal dia tafiditra ao anatin'ny ampahan'ny haino aman-jery Android. Ny terminal dia tsy iza fa ny Xiaomi RedMi Note 4G, toy izany Smartphone efijery 5,5 ″ eo ambanin'ny 170 Euros fotsiny.
Andro vitsy lasa izay, inona Nanoratra lahatsoratra niaraka tamin'ny tolo-kevitro na safidiko momba ny terminal Android. Lahatsoratra iray izay nanolorako fantsona telo isaky ny elanelam-potoana, manaraka hatrany ny masonkarako manokana ary mitady ny tahan'ny kalitao / vidiny mety indrindra. Tao amin'ilay lahatsoratra voalaza etsy ambony, nanoro hevitra ny Xiaomi RedMi Note 4G, ahoana ny terminal tiako indrindra sy atoro ahy ao amin'ny faritra Android midadasika. Ny antony nisafidianako ity terminal mampihetsi-po ity, hanimba ny mivantana ny Motorola Moto G 2014, azonao atao ny mahita azy ireo mivantana amin'ilay famerenana sy famakafakana video feno izay mitarika ity lahatsoratra ity.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi RedMi Note 4G
2 Fahalemen'ny Xiaomi RedMi Note 4G
3 Ny tanjaky ny Xiaomi RedMi Note 4G
Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi RedMi Note 4G
Hanomboka hilaza aminao fa manana izahay ny kinova LTE an'ny RedMi Note, kinova mandefa ny processeur Mediatek an'ny kinova 3G iray manontolo Qualcomm Snapdragon 400 Quad Core amin'ny 1,6 Ghz hafainganam-pandehan'ny famantaranandro. Ankoatr'izay, tsy toy ny maodely Mediatek izay manana ny maha-izy azy ny SIM roa heny, ity RedMi Note 4G dia tsy misy afa-tsy slot karatra SIM iray ihany.
Xiaomi RedMi Note 4G na Xiaomi HongMi Note 4G
Operating System Android 4.4.2 Kit Kat miaraka amina layer manokana MIUI V5 azo havaozina ho MIUI V6
efijery IPS 5'5 "misy vahaolana HD 1280 x 720 teboka
fepetra 154 x 78'7 x 9'45 mm
Fahatsiarovana anaty 8 GB tsy misy fizarazarana ho an'ny angona sy Apps 4'98 Gb ary miaraka amin'ny fanohanan'ny MicroSD hatramin'ny 64 Gb
Fakan-tsary aloha 5 mpx BSI
Fakan-tsary Rear 13 mpx miaraka amin'ny FlashLED ao anatin'izany ny autofocus sy ny aperture 2'2 mifantoka
Conectividad Fanohanana Wifi 802.11 a / b / g / n / ac ho an'ny tarika 2.4 GHz hatramin'ny 5 GHz / Bluetooth 4.0 ary GPS + AGPS + GLONASS + BDS
bateria 3100 mAh Polymer Lithium-ion
vidiny 168'99 Euros
Fahalemen'ny Xiaomi RedMi Note 4G
Ny terminal Android rehetra izay vitako ny nanadihady dia tsy isalasalana fa manana ny tanjaka sy ny fahalemeny, ary amin'ny tranga misy ny Xiaomi RedMi Note 4G Tsy ho hafa io, ka tanisaiko izy ireo:
Sosona fanaingoana MIUINa dia izany ho an'ny mpampiasa maro aza dia fitahiana satria izy io dia iray amin'ireo soso-kevitr'asa be pitsiny indrindra ho an'ny Android, angamba ho an'ny mpampiasa maro dia mampiavaka azy io. Na dia, ho an'ireo olona rehetra tia ny interface mitovy amin'ny Android tany am-boalohany aza, azonao atao ny mametraka, araka ny asehoko anao amin'ilay horonan-tsary, Mpandefa ho an'ny Android.
Fampiharana efa napetraka mialoha. Zavatra iray hafa hitako manohitra ity Xiaomi RedMi Note 4G ity dia ny be dia be amin'ireo rindranasa sinoa sy tsy voadika izay apetrakao amin'ny toerana misy anao, na dia eo aza izany, manohana azy io saika ny ankamaroan'izy ireo, ankoatry ny fampiharana roa, afaka manafoana azy ireo amin'ny fomba tena mora isika tsindrio fotsiny ary tazomy ny kisary fampiharana ary sintomy mankany amin'ny fako fitoeram-pako eo an-tampon'ny efijery.
Terminal lanja, miaraka amin'ny 189 grama, na dia tsy tapa-kevitra aza izy io, raha ampitahaina ohatra amin'ny Samsung Galaxy Note 4, dia 10 grama fotsiny no tsy fitovizany.
Mpikabary ao aorianaNa dia madio sy mahery vaika aza ny feo dia very mazava sy hery kely izy rehefa apetraka amin'ny faritra fisaka.
Ny tanjaky ny Xiaomi RedMi Note 4G
Ho an'ny tanjaky ny Xiaomi RedMi Note 4G, ankoatry ny vidiny mifaninana indrindra amin'ny 169,99 euro ihany, azontsika atao ny manasongadina ireto hevitra manaraka ireto:
Famaranana kanto vita amin'ny plastika avo lenta izay manome fahatsapana premium ho azy.
Sarimihetsika IPS 5'5 Large lehibe misy famahana HD izay azo alaina tanteraka ho an'ny mpampiasa satria manana bokotra ara-batana capacitive izy io.
Zoro fijerena efijery 178º.
Fahatsiarovana fitehirizana 8 Gb fotsiny, izay maimaim-poana ho an'ny angona sy ny fampiharana 4,98 Gb na dia misy aza izy rehetra ahafahana mametraka rindranasa satria tsy manana fizarana manokana miaraka amin'ny fetra izay tokony hidika izany. Ho fanampin'ny fananana fanohanana ny karatra fahatsiarovana hatramin'ny 64 Gb amin'ny fahafaha-mitahiry ambony indrindra.
Batterie 3100 mAh lehibe izay miantoka ny fizakan-tena lehibe, mihoatra ny iray andro amin'ny fampiasana mahery vaika amin'ny fampiasana adiresy dimy ora eo ho eo. Amin'ny fampiasana azy amin'ny fomba refesina dia tonga be loatra ny terminal rehefa afaka roa andro miaraka amina fiampangana tokana.
Kalitao tsara avy amin'ny fakantsary roa, hany ka io no tsara indrindra azoko notsapaina tamin'ny faran'ity sarany ity.
Rafitra fanavaozana an'i Xiaomi, izay efa nanamafy ny fisian'ny MIUI V6 ho an'ity maodelin'ny terminal ity, ary nanamafy ara-pomba ofisialy ny fanavaozana ny Android 5.0 Lollipop aza.
Vidin'ny terminal, antsasaky ny terminal Android misy famaritana ara-teknika mitovy ihany.
Mamarana sy manome ny hevitro manokana, ny Xiaomi RedMi Note 4G Io no iray amin'ireo terminal Android antonony tsara indrindra azontsika atao amin'izao fotoana izao, ho ahy safidy voalohany mialoha heverin'ny mpanjaka maro an'ny Android afovoany mahery indrindra Motorola Moto G 2014.
Raha liana ianao mividy Xiaomi RedMi Note 4G, Apetako ny rohy iray amin'ireo fivarotana an-tserasera tsara indrindra hividianana terminal terminal sinoa, fivarotana an-tserasera mitovy dika amin'ny kalitao ary ny hatsarany lehibe indrindra, ankoatry ny fiantohana ofisialy ny fividianany rehetra, dia manana trano fitobiana any Espana izy ireo, izay mamela azy ireo hanome toky anao ny vidin'ny terminal raha tsy matahotra ny fadin-tseranana, ary koa ny fandefasana ao anatin'ny 24/48 ora fotsiny. Tena miresaka momba ny sakaizan'i Geeklife aiza no ahitanao ity Xiaomi RedMi Note 4G amin'ny vidin'ny 168,99 euro, ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi RedMi Note 4G, angamba ny elanelam-potoana Android tsara indrindra amin'ny vidiny ambany
nachobcn dia hoy izy:
Ny tsy mazava ao amin'ilay lahatsoratra dia ireo zavatra izay mihoatra ny MotoG. Raha ny marina dia fakan-tsary mety 'mety' no hitako, ary isa mahasoa kokoa amin'ny bateria, saingy toa tsy misy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny fiainana bateria, satria, farafaharatsiny, ny vehivavy motoG, mahatratra 2 d ny faharetany , tsy misy olana. Izy io koa dia manana sim indroa sy ram 16gb, izay tsy endri-javatra tsy dia misy dikany loatra. Ary ny vidiny toa ilay voalaza dia saika nitovy. Azoko ihany koa fa mora kokoa ny miatrika an'i Amazon na Motorola raha sendra olana.
Mamaly an'i nachobcn
Francisco tsara. Moa ve ny tranokala Geekvida izay atolotray fa misy serivisy aorinan'ny varotra tsara, ary azo itokisana ve izy io amin'ny olan'ny fiantohana? Resy lahatra aho fa hividy ny Xiaomi ao amin'ny tranonkalanao, saingy tsy te-ho voasambotra ny rantsan-tànako.
Andao hojerentsika ny namako Juanjo, izaho manokana dia nampiasa serivisy Geekvida ary ny marina dia tena azo atokisana izy ireo. Voalohany dia manana trano fanatobiana entana any Espana izy ireo ary mazàna dia tonga ao anatin'ny 24 ora ny filaharana, farafaharatsiny 48 ora raha efa napetrakao ny filaminana ny tolakandro. Ny fandefasana dia tonga tamiko tamin'ny MRW ary isaky ny nanana ny kaody fanarahan-dia ny fonosana aho,
Mikasika ny antoka, raha mijery ireo mpampiasa sy ny fanombatombanana azy ireo dia mendrika ny fahatokisako rehetra ihany koa, na dia soa ihany aza fa tsy nila nampiasa azy io velively aho ary manantena ny tsy hampiasa azy io.
Farany, manana ny vidin'ny fifaninanana indrindra hitan'izy ireo tamin'ny Internet izy ireo, ohatra, ny Xiaomi RedMi Note 4G izay manoro hevitra anao manokana aho hividy, azonao atao izany amin'ny fivarotana an-tserasera hafa amin'ny Internet amin'ny vidiny be. avo kokoa noho izany dia tsy maintsy ampiantsika ny fotoana fiandrasana amin'ny fandefasana ny vokatra sy ny vidin'ny fandefasana.
Geekvida dia tsy isalasalana fa fivarotana azo antoka, matotra ary azo itokisana.
Juan Valle dia hoy izy:
Tianay izany raha ampahafantarinao anay ny fomba famindrana ny fisoratana anarana amin'ny karatra SD (raha azo atao), misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Juan Valle
Eto ianao dia manana izany amin'ny horonan-tsary sy izay rehetra navoaka vao 4 ora lasa izay:
Misaotra betsaka, andao hiaraka aminy.
Salama aho manana naoty mena x ary nohavaoziko ho miuv6, tsara daholo, saingy tsy haiko hoe aiza no ahitana boky fampianarana hametrahana feo alaina amin'ny tranonkala, alaina amin'ny dwonload izy ireo ary avy eo aiza ary ahoana no fomba no adika
Manana fanontaniana bebe kokoa aho, ahoana ny fametrahana ny emotikona eo amin'ny fitendry?
Paloma dia hoy izy:
Vao nividy azy io tao amin'ny GeekVida aho ary tsy fantatro ny fomba fametrahana ilay karatra 🙁
Valiny tamin'i Paloma
Salama francisco, masinina ,, fanontaniana kely ,,,, Manana an'ity terminal ity aho, azonao atao ve ny miteny amiko raha mifanaraka amin'ny haitao 2.0 haingam-pandeha haingana, ny famandrihana bateria haingana? misaotra mialoha triatra
Waze sy ny fampiharana toa ny SocialDrive eo amin'ny sain'ny polisy
Mpizaha tranonkala 5 ho solon'ny Chrome for Android